सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुरा कुप्रचार होः प्रधानमन्त्री (अन्तरवार्ता) | suryakhabar.com
बाँके र रुपन्देहीमा थप सात कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
सगरमाथा आधार शिविरमा कुनैपनि स्वास्थ्य जोखिम छैनः पर्यटन मन्त्रालय
आगामी बैठकका सन्दर्भमा पार्टीको रणनीति तय गर्न बस्दैछ कांग्रेस संसदीय दलको बैठक
Home कुराकानी सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुरा कुप्रचार होः प्रधानमन्त्री (अन्तरवार्ता)
on: ७ बैशाख २०७७, आईतवार १८:०५ In: कुराकानीTags: @kpsharmaoliNo Comments
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट बच्न नेपालमा सुरक्षाका उपाय अवलम्बनसहित रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका काम भइरहेका छन् । महामारी बिफल पार्न सरकारले हवाई र स्थलमार्गबाट आवागमन रोकेर गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी गरेको छ भने परीक्षणको दायरालाई जिल्ला–जिल्लामा विस्तार गरेको छ । सरकारले जारी गरेको लकडाउनलाई सबै दल, नागरिक क्षेत्र र आम जनताले समर्थन गरेका छन् । बाध्यात्मक यस लकडाउनका कारण समग्र आर्थिक गतिविधि र खासगरी ज्यालादारी, श्रमिक र गरिखाने वर्ग समस्यामा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले उपचार नपाएर रोग वा खान नपाएर भोकका कारण कुनै पनि नागरिक मर्नु नपर्ने घोषणा गर्दै आउनुभएको छ, तर सम्बन्धित तहमा कार्यान्वयन तथा समन्वयका क्षेत्रमा कतिपय गुनासो र कमजोरीहरु देखिएका छन् । यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग शनिबार साँझ गरेको कुराकानी(रासस)को सम्पादित अंशः
यो प्रश्न म तिनैलाई सोध्न चाहन्छु कि आज कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा कुन देशमा यस्तो संयन्त्र गठन भएको छ ? विश्वका कतिपय देशमा संयुक्त सरकार छन्, कुनै अल्पमतका सरकार छन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै मुलुकमा सरकारभन्दा माथि अर्को संयन्त्र छ ? कुन प्रजातान्त्रिक वा व्यवस्थाको मुलुकको छ ? जबकि नेपालको वर्तमान सरकार दुईतिहाइ नजिकको बहुमत र जनादेशप्राप्त सरकार हो । सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदममा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र आम जनताको समर्थन र सहकार्य छ । सबैबाट आएका उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सरकार तयार छ । सरकारले उचित समन्वय गरिरहेको छ । सरकारले संविधान र कानूनअनुसार उत्तरदायित्व पूर्णरूपमा काम गर्छ । त्यसैका लागि जनतासँग शपथ लिएको सरकार हो यो । अब एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति बेग्लै कुरा हुन् । नागरिक समाज पनि राख्नुपर्ने भनिएको छ रु अनि कुन नागरिक राख्ने वा छुटाउने रु त्यसो भए सबै नागरिक स्वतः सदस्य रहेको एक संयन्त्र बनाऊँ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ । अन्यथा मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनाधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो । यस्ता कुराहरुको कुनै अर्थ छैन ।
केहीले व्यक्तिगत कुण्ठा, अन्योल र दिशाहीनताले सदाबहार कराउने प्रवृत्ति देखिन्छ । हुटिट्याउँ प्रवृत्ति छ । ती कुराहरु कति सान्दर्भिक छन् ? तिनले आफैँलाई असान्दर्भिक बनाउँछन् । तिनले बिरामी प्रधानमन्त्रीले देश चलायो भन्छन् । मबाट यो भन्दा बढी के अपेक्षा गर्ने ? आफैँ बिरामी भएर पनि देशलाई सङ्क्रमणबाट जोगायो भन्न पनि सकिन्थ्यो । मेरो काम गर्ने बानी छ, गरिरहन्छु । म अहिले पनि दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु । मलाई जश लिनुपर्ने वा मूल्याङ्कन होस् भन्ने भावना पनि छैन । बफादारिताका साथ देश र जनताका लागि काम गर्ने हो । अराजकतालाई लोकतन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति ठिक होइन । त्यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीलाई नोक्सान नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नोक्सान गर्छ ।
कालोबजारी/भ्रष्टाचार गर्नेलाई जनताले देख्नेगरी कारबाही गर्न राप्रपाको जोडदार माग
८ चैत्र २०७७, आईतवार १४:५१
५ चैत्र २०७७, बिहीबार १३:३५
१५ मंसिर २०७७, सोमबार १३:०२
चलचित्र क्षेत्रमा सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउने मन्त्री ज्ञवालीको भनाई
१० बैशाख २०७८, शुक्रबार १८:०८
२४ घण्टामा कोरोनाबाट ५० को मृत्यु, थपीए ९ हजार १९६ जना संक्रमित
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १७:२४
भेन्टिलेटरको चरम अभावः पु¥याइयो एकैदिन दुई सङ्क्रमितलाई बिएण्डसी
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १५:२३
अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या भयाे – अल्का अस्पताल
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १२:४४
मानिस बचेमा अर्थतन्त्र पुनः उठाउन सकिन्छ– प्रधानमन्त्री ओली